Misaintsaina Ny Fampahalalam-baovaon’olo-tsotra Sy An’ny Fiarahamonina Ao Japana Amin’ny Taona 2020 · Global Voices teny Malagasy
Misaintsaina Ny Fampahalalam-baovaon'olo-tsotra Sy An'ny Fiarahamonina Ao Japana Amin'ny Taona 2020
Nandika (en) i Taylor Cazella
Voadika ny 10 Febroary 2014 13:52 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, 日本語
[Mankany amin'ny pejy miteny Japoney avokoa ny rohy rehetra raha tsy misy ny fanamarihana hafa.]
Tahaka ny ahoana ny fampahalalam-baovao an'olo-tsotra amin'ny taona 2020? Kihon-dalana eo amin'ny tantara izany amin'ny lafiny sasany ho an'i Tokyo, tanàna vao nandrombaka ny fandraisana ny Lalao Olaimpika. Raha afaka enin-taona hatreto, tahaka ny ahoana ny fampahalalam-baovaon'olo-tsotra sy ny fampahalalam-baovaon'ny fiarahamonina amin'izy izao manohy manome vaovao hoan'ny vahoaka izao? Izany tena fanontaniana izany no ivon'ny lohahevitra tamin'ny Valandresaka antsoina hoe Andeha Hosaintsainina ny Momba Ny Fampahalalam-baovaon'Olo-tsotra sy ny Fampahalalam-baovaon'ny Fiarahamonina amin'ny Taona 202O», notontosaina tamin'ny 1 Febroary 2014, tao Pundit, sehatra vaovao fanaovan-danonana ao Tokyo.
Nandray ireo vahiny niezaka nisava lalana teo amin'ny sehatry ny fampahalalam-baovao an'olo-tsotra sy ny fampahalalam-baovao an'ny fiarahamonina ao Japana tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-21, vanim-potoana ahafahan'ny olona mizara sary fampahalalam-baovao maimai-poana noho ny fisian'ny Aterineto, ny lanonana. Mpanao gazety mahaleotena Taro Iwamoto, izay nitsidika isan-kerinandro ireo fihetsiketsehana manohitra ny nokleary teo anoloan'ny trano fonenana ofisialin'ny praiminisitra japoney mitondra fakàn-tsary eny an-tanany, no nanomboka nampiasa solosaina finday handefasana ny fihetsiketsehana ao amin'ny aterineto. Miasa ho olon'ny onjam-peo ao amin'ny FM Tomi, onjam-peon'ny fiarahamonina ao amin'ny tanànan'i Tomi, distrikan'i Nagano i Asuka Hashidzume, rehefa avy niasa tamin'ny fampielezam-peo an'Aterineto tsy mitady tombombarotra OurPlanet-TV [en] sy OhMyNews!Japan, sehatra fampitàm-baovao an'olo-tsotra. Taorian'ny fihovitrovitry ny tany tao Tohoku tamin'ny Marsa 2011 vao nitodihana ny fampiasana ny teknolojia hampielezana vaovao tsy avy amin'ny matihanina.
Niditra an-tsehatra koa ireo mpianatra avy ao amin'ny “Tetikasam-Pampahalalam-baovao an'Olo-tsotra Tantanin'ny Mpianatra Ho Fanomezana Fanampiana Ireo Faritra Trà-boina” ao amin'ny Oniversiten'i Musashi, nanao topimaso ny fampiasana lahatsary avy amin'olontsotra mampiasa fakàn-tsary tsy matihanina nandritra ny fizarana voalohany tamin'ny lanonana.
Tetikasam-Pampahalalam-baovao an'olo-tsotra Tantanin'ny Mpianatra Ho Fanomezana Fanampiana Ireo Faritra Tra-boina:
Nanaraka izany, ny fizarana faharoa dia nandinika ny fampiasana amin'ny fomba vaovao ny media jerena imaso vokarin'olon-tsotra. Anisan'ireo mpandray fitenenana i Yuichi Watanabe, izay mitantana ny Laboratoara Hoan'ny Fifanakalozan-kevitra Manerantany (The Laboratory for Global Dialogue) [en], tetikasam-pifandraisana mifanatrika mampiasa antso an-dahatsary amin'ny alalan'ny aterineto sy ny finday mifandray amin'ny zanabolana mba hifaneraseran'ny olona mifanalavitra dia mifanalavitra. Eo koa i Tadakazu Fukutomi, mpampianatra tompon'andraikitra amin'ny Tetikasa Kawasaki 1 SEG, tetikasa nivoaka ao amin'ny Oniversite Senshu mitondra fampielezana am-peo/an-tsary nomerika amin'ny finday an-tanety [en] izay mety ho lasa endrika vaovao hoan'ny fampitam-baovao eo amin'ny fiarahamonina eny amin'ny oniversite. Hiroaki Sato, mpanakanton-dahatsary izay niasa nandritra ny taona maro tao amin'ny komitin'ny mpitsara ao amin'ny Fetiben'ny Lahatsary ao Tokyo, fetiben'ny lahatsarin'olon-tsotra lehibe indrindra manerantany teo aloha, no nanentana ny adihevitra.
Resadresaky ny mpianatra ambaratonga fototra ao Miyagi, Japana sy Aceh, Indonezia amin'ny alalan'ny aterineto :
Ny hetsika no santatry ny andiany mitohy izay hifantoka amin'ny mety hoavin'ny fampitam-baovaon'ny fiarahamonina sy ny fampitam-baovaon'olo-tsotra amin'ny taona 2020.
Nahitsin'i Keiko Tanaka ny lahatsoratra amin'ny teny anglisy.
1 herinandro izayIndonezia
Manampahefana ao Indônezia, manandrana manampim-bava ireo mpikatroka ao amin'ny Greenpeace, niova làlana rehefa voakiana
2 herinandro izayTaiwan (ROC)
Taiwan: Takian'ireo niharan'ny lahatsary vetaveta nampiasàna “deepfake”ny hisian'ny lalàna vaovao manohitra ny herisetra ara-nofo any anaty habaky ny aterineto
2 herinandro izayKambodza
Fomba entin'ny tanora Champani ao Kambodza hampiroboroboana ny kolontsain-dry zareo tanaty valan'aretina